ZayedCoin စျေး - အွန်လိုင်း ZYD ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ZayedCoin (ZYD)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ZayedCoin (ZYD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ZayedCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $9 949.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ZayedCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ZayedCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZayedCoinZYD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00677ZayedCoinZYD သို့ ယူရိုEUR€0.00572ZayedCoinZYD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00517ZayedCoinZYD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00615ZayedCoinZYD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0602ZayedCoinZYD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0426ZayedCoinZYD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.149ZayedCoinZYD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0251ZayedCoinZYD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00898ZayedCoinZYD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00944ZayedCoinZYD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.149ZayedCoinZYD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0525ZayedCoinZYD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0367ZayedCoinZYD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.507ZayedCoinZYD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.14ZayedCoinZYD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00928ZayedCoinZYD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0104ZayedCoinZYD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.211ZayedCoinZYD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0471ZayedCoinZYD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.722ZayedCoinZYD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩8.04ZayedCoinZYD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.61ZayedCoinZYD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.493ZayedCoinZYD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.185
ZayedCoinZYD သို့ BitcoinBTC0.0000006 ZayedCoinZYD သို့ EthereumETH0.00002 ZayedCoinZYD သို့ LitecoinLTC0.000124 ZayedCoinZYD သို့ DigitalCashDASH0.00007 ZayedCoinZYD သို့ MoneroXMR0.00008 ZayedCoinZYD သို့ NxtNXT0.528 ZayedCoinZYD သို့ Ethereum ClassicETC0.000998 ZayedCoinZYD သို့ DogecoinDOGE1.95 ZayedCoinZYD သို့ ZCashZEC0.00008 ZayedCoinZYD သို့ BitsharesBTS0.209 ZayedCoinZYD သို့ DigiByteDGB0.217 ZayedCoinZYD သို့ RippleXRP0.024 ZayedCoinZYD သို့ BitcoinDarkBTCD0.000233 ZayedCoinZYD သို့ PeerCoinPPC0.0225 ZayedCoinZYD သို့ CraigsCoinCRAIG3.08 ZayedCoinZYD သို့ BitstakeXBS0.289 ZayedCoinZYD သို့ PayCoinXPY0.118 ZayedCoinZYD သို့ ProsperCoinPRC0.85 ZayedCoinZYD သို့ YbCoinYBC0.000004 ZayedCoinZYD သို့ DarkKushDANK2.17 ZayedCoinZYD သို့ GiveCoinGIVE14.66 ZayedCoinZYD သို့ KoboCoinKOBO1.54 ZayedCoinZYD သို့ DarkTokenDT0.00624 ZayedCoinZYD သို့ CETUS CoinCETI19.56